Trello vs Asana - Halkee laga Maamulaa Mashaariicdaada 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Trello vs Asana - Halkee laga maamulaa mashaariicdaada 2021
Trello vs Asana - Halkee laga maamulaa mashaariicdaada 2021
Trello iyo Asana waa laba ka mid ah qalabka maaraynta mashruuca ee ugu caansan halkaas. Markaa waa tan su'aasha: Trello vs Asana, keebaa u dooranaya ganacsigaaga?
Aan ku ogaanno isbarbardhiggayaga qoto dheer!
Trello wuxuu ku bilaabay sida Fog Creek Software alaabta.
Sida laga soo xigtay Joel Spolsky, aasaasaha Trello, waxay qoreen line-ka koowaad ee koodka alaabtan Janaayo 2011.
Waxa uu sheegay in saddex bilood oo shaqo ah ka dib, software-ku uu faa'iido u lahaa in la furo, laakiin ay go'aansadeen in ay sii nadiifiyaan ka hor inta aan loo bandhigin dadweynaha. Software-ka Fog Creek wuxuu bilaabay Trello Sebtembar 2011 shirka Tech Crunch's Disrupt.
Waxay ahayd wax soo saar cusub oo maarayn mashruuc oo ku salaysan nidaamka wax soo saarka Kanban.
Nadaamka Kanban waxaa sameeyay Injineer u dhashay Japan Taiichi Ohno isaga oo isku dayaya in uu horumariyo habka wax soo saarka Toyota.
Waxay ahayd guul sidan oo kale ah in nidaamkani ku faafo wax ka baxsan samaynta baabuurta oo uu u gudbo warshado kale sida tafaariiqda, software, iyo xitaa shineemo.
Waxa kale oo ay soo jiidatay indhaha shakhsiyaadka u arkayay in ay tahay hab lagu horumarinayo wax soo saarkooda.
Waa kuwan sida guddiga Kanban ee aasaasiga ah u ekaado:
Kanban board (Isha sawirka: Simaticodesignstudio.com)
Dabcan, guddiga Kanban ee urur weyn ayaa aad uga dhib badan tan, laakiin waxaad heleysaa fikradda.
Fog Creek Software waxay dhistay qalab u oggolaanaya shirkadaha inay abuuraan guddiga Kanban dhijitaalka ah.
Waa kuwan guddiga shirkad khayaali ah oo la yiraahdo Artist Exploitation, Inc. oo Joel Spolsky uu u adeegsaday soo jeedintiisa Disrupt:
Garoonka Trello ee San Fransisco 2011
Hadda, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato inay ka soo wareegtay ku dhawaad ​​toban sano ka hor.
Waqtigaas, isticmaalka guddiga Kanban ee barnaamijka maareynta mashruuca waxay ahayd fikrad kacaan, oo lagu daray abuurista waxay ahayd caqabad farsamo oo culus.
Joel Spolsky soo bandhigay wuxuu ahaa guul: wuxuu ku guuleystay "ka faa'iidayso 6 daqiiqo oo caan ah 130,000 oo kubbadaha indhaha" iyo 22% dadkaas waxay u saxiixeen Trello.
Trello oo ka faa'iidaysanaysa dareenka warbaahinta
Spolsky waxay guushan u nisbisay xaqiiqda ah inay haysteen wax soo saar adag:
"Haddii aan soo saari lahayn Trello oo 3 bilood jir ah, may ahayn wax cajiib ah. Waxaa laga yaabaa xitaa MEH. Ma rabo 131,000 oo kubbadda indhaha ah MEH.
Wixii markaas ka dambeeyay, Trello wuxuu koray si ba'an wuxuuna gaaray 10 milyan isticmaalayaasha 2015.
Si kastaba ha ahaatee, sida Hiten Shah ku tilmaamay maqaalkiisa "Waa maxay sababta Trello uu ugu guuldareystay inuu dhiso ganacsi $ 1 bilyan ah", Tartamayaashoodu aad bay ugu shaqaynayeen looxyada Kanban. Muddo yar ka dib, fikradii kacaanka ahayd ayaa aakhirkii noqotay meel caadi ah.
Asana waxay soo bandhigtay muuqaalkooda guddiga Kanban ee 2016 (wax badan oo ku saabsan kan hoose), "si aad ah u dhiirigeliyay" Trello:
"Xaqiiqdii waxaan siinaa Trello sumcad buuxda. Taasi waa si cad badeecada samaysay shaqo wanaagsan oo hormood u ah aragtidan. Waxaan u aragnaa Trello sifo ahaan, ee ma aha badeecad.”
ayuu yiri Justin Rosenstein oo ah aasaasaha Asana.
Si kastaba ha ahaatee, Trello ayaa sii kordheysa oo ay gaartay 25 milyan isticmaalayaasha 2017. Isla sanadkaas, waxaa ku iibsaday Atlassian $ 425 milyan.
Maanta, Trello waxay leedahay in ka badan 35 milyan isticmaale waana mid ka mid ah shirkadaha aadka loo ixtiraamo ee goobta maaraynta mashruuca.
Hagaag, waa maxay sida saxda ah Trello u siiso isticmaaleyaasheeda?
Nidaamka Kanban ayaa weli ah xudunta u ah Trello. Waxay bixisaa horumar muuqaal ah oo muuqaal ah mashaariicda sababtoo ah waxaad arki kartaa kaar kasta oo ka socda bidix ilaa midig marka shaqada hawshu socoto.
A Trello guddiga
Sida aad arki karto, UI aad ayuu la mid yahay sidii uu ahaa 2011, marka laga reebo in hadda uu yahay mid soo jiidasho leh.
Waxaad ku martiqaadi kartaa dad badan guddigaaga inta aad rabto bilaash, taas oo aad u fiican haddii aad la shaqeyso koox weyn.
Waxaad habayn kartaa shaqadaada adiga oo abuuraya loox, liisaska, ka dibna kaadhadhka hawl kasta, ka dibna kaararka ku dhex wareejinaya liiska markaad horumar ka samaynayso hawlaha.
Kaararkani maaha kaliya nuqul dhijitaal ah oo qoraalo dhegdheg ah. Waxaad ku dari kartaa macluumaad badan, sida sharraxaadda shaqada, taariikhda kama dambaysta ah, sumadda, liiska hubinta horumarka, lifaaqyada, iwm.
Jid ahaan, ka hadalka liisaska hubinta iyo taariikhaha kama dambaysta ah, Trello waxa ay leedahay Kor-u-qaadka Jadwalka kaas oo awood kuu siinaya in aad aragto kaadhadhka taariikhaha la filayo ee jadwalka.
Trello waxaa ka maqan nidaamka ku tiirsanaanta hawsha. Si kastaba ha ahaatee, waxaad isticmaali kartaa walxaha qaarkood gudaha kaararka, sida liiska hubinta iyo lifaaqyada, si aad u muujiso ku tiirsanaanta shaqada. Waxaad ka akhriyi kartaa wax badan oo ku saabsan maaraynta ku-tiirsanaanta hawsha halkan.
Kaadhadhku sidoo kale waxay leeyihiin muuqaal faallooyin ah, markaa haddii aad u baahan tahay inaad ka hadasho wax la xidhiidha hawshaas, waxaad ku dhex samayn kartaa kaadhkaas:
Tani waa mid anfacaya sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku hayso isgaarsiin hal meel ah oo ka soo horjeeda in lagu kala firdhiyo dhowr kanaal (email, fariimo degdeg ah, fariin qoraal ah, iwm.).
Trello waxa kale oo uu leeyahay nidaam ogeysiin ah oo ku siiya wax cusboonaysiin ah isaga oo kuu soo diraya ogeysiisyada gudaha abka, iimaylka, browserka, iyo moobilka.
Ogeysiisyadan waxaa lagu soo daray dhammaan aaladaha si aadan ula macaamilin xanaaqa ogeysiisyada akhriska ee muujinaya mid aan la akhriyin. Oo haddii aad hesho ogeysiis iimaylka, waxaad si toos ah ugu jawaabi kartaa iimaylka.
Waxa kale oo jira shaqo raadin awood leh oo kaa caawinaysa inaad si degdeg ah u hesho wax kasta oo aad raadinayso.
Haddii aad rabto in aad isticmaasho Trello in ka badan hal koox oo dad ah, waxaad isticmaali kartaa kooxaha Trello (sidaas, waxaad yeelan kartaa koox qoys, koox saaxiibo ah, koox shaqo, iwm.).
Trello waxay leedahay awood-Ups kala duwan. Waxay kuu oggolaanayaan inaad awood u siiso astaamo dheeri ah oo ku yaal looxyadaada oo aad ku dhexgeliso software-ka abka aad jeceshahay.
Tusaale ahaan, qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee Korontada ah waxaa ka mid ah Korantada Kalandarka ee hore loo sheegay, iyo sidoo kale Google Drive, iyo Slack Power-ups:
Waxaad ka arki kartaa liiska dhammaan Power-ups halkan. Way badan yihiin!
Trello waxa kale oo ay bixisaa kordhin browser kala duwan kuwaas oo anfacaya marka aad isticmaasho Trello badan. Tusaale ahaan, kordhinta PopClip, waxaad ku kaydin kartaa qoraalka la doortay Trello ee Mac. Waxaad ku arki kartaa liiska dhammaan kordhinta browserka halkan.
Sidoo kale, waxaa xusid mudan in Trello uu si dhab ah u qaato asturnaanta. Waxaad si buuxda u maamusho cidda arki doonta guddigaaga. Intaa waxaa dheer, waxay isticmaalaan isku xirka SSL/HTTPS.
Trello waxa ay leedahay saddex heerar oo qiimo jaban:
Bilaash Tani waa qorshaha ugu aasaasiga ah. Waxay ballan qaadayaan in ay weligeed xor ahaan doonto.
Heerka Ganacsiga. Kani waa $9.99/qorshe isticmaale bishiiba. Waxaa loola jeedaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee u baahan astaamo ka badan kuwa la socda nooca bilaashka ah.
Ganacsiga. Kani waa qorshe ka bilaabmaya $20.83/user/bishii,laakin qiimuhu wuxuu ku xidhan yahay inta kursi ee aad u baahantahay
Dhammaan saddexda qorshe waxay bixiyaan loox aan xadidnayn, liisyo aan xadidnayn, iyo kaarar aan xadidnayn, taas oo tan ka dhigaysa qalab weyn oo loogu talagalay bilawga.
Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado sifooyinka aadka u horumarsan sida automation iyo power-up, qorshaha xorta ah waa mid xadidan.
Sidoo kale, qorshaha xorta ah wax badan kama soo kordhinayo dhanka amniga. Haddii aad rabto inaad awood u yeelatid inaad dejiso oggolaanshaha maamulka sare, soo dir martiqaadyada xaddidan ee domainka ama aad joojiso xubnaha, waxaad u baahan doontaa inaad u cusboonaysiiso midkood fasalka Ganacsiga ama Ganacsiga.
Intaa waxaa dheer, qorshayaasha khidmadaha ayaa bixiya 100+ isku-dhafka, iyadoo la adeegsanayo taas oo siin karta kooxdaada kor u kaca wax soo saarka.
Waa maxay awoodaha Trello?
Trello xooggiisa ugu weyn waa isaga halleeyo lillaahinimada.
Tani waa muhiim sababtoo ah qalab kasta oo aad u soo bandhigto kooxdaada waxay u baahan tahay dadka inay waqti galiyaan si ay u hagaan. Fududnaanta waxay yaraynaysaa wakhtiga loo baahan yahay si loo tababaro xubnaha cusub ee kooxda.
Sidoo kale, Trello waa mid cajiib ah oo wax ku ool ah. Waxaa la abuuray iyadoo maskaxda lagu hayo ganacsiyo, markaa waa ammaan in loo qaato in kiiskooda ugu badan ee la isticmaalo uu yahay maareynta mashruuca ganacsi yar.
Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo loo isticmaali karaa in si qurux badan loo maareeyo mashruuc kasta oo aad ka fikiri karto, laga bilaabo qorshaynta fasaxa ilaa abaabulka xaflad ilaa dib u hagaajinta guri.
Dhab ahaantii, in uu "25 Milyan! Ku Dabaaldeg 4 Sifooyin Trello oo Cusub oo La Codsaday Aasaasaha Trello Michael Pryor ayaa la wadaagay in kooxdu ay inta badan la yaabto kiisaska isticmaalka ee ay arkaan. Isagoo la hadlaya isticmaalayaasha, wuxuu yidhi:
"Waxaad hormuud ka tahay siyaabo aad u isticmaasho Trello oo aynaan waligeen ku riyoon karin. Laga soo bilaabo dhuumahaaga iibka muhiimka ah ilaa looxyadaada fasaxa, kanbanskaaga ilaa haamahaaga qasacadaha, khariidadahaaga dariiqyada looxyadaada cuntada: Adeegsigaaga hal abuurka leh ee Trello si aad ugu noqoto mid wax soo saar leh shaqada iyo gurigaba waxay sii wadaan inay naga yaabiyaan."
Tani waa mid aad u fiican sababtoo ah waxaad isticmaali kartaa qalab isku mid ah si aad u maamusho mashaariicda shakhsi ahaaneed iyo kuwa xirfadeed labadaba.
Yuu u fiican yahay Trello?
Trello wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa ganacsiyada yaryar ee leh habab cad, toosan, oo doonaya software fudud, dareen leh oo xubnaha kooxdu ay si degdeg ah u baran karaan.
Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad waydiiso inaad ku maarayn karto ganacsigaaga guddi Kanban oo jir ahaaneed haddii kooxdaada oo dhami ay ka wada shaqeeyaan isla xafiis.
Inta badan milkiilayaasha ganacsiga yaryar ayaa taas samayn kara, taas oo macnaheedu yahay inay u badan tahay inay ka faa'iideysanayaan isticmaalka Trello, gaar ahaan haddii ay ka shaqeynayaan mashaariic toos ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii kooxdaadu aad u weyn tahay oo mashaariicdaadu aad u adag yihiin, markaa Trello malaha ma gooyn doonto.
Asana waxaa la aasaasay 2008 by Justin Rosenstein iyo Dustin Moskovitz. Moskovitz waa aasaasihii Facebook iyo Rosenstein waa injineer hore Google iyo hore Facebook.
Labaduba waxay ka shaqeeyeen hagaajinta maamulka mashruuca iyo kordhinta wax soo saarka shaqaalaha ee Facebook.
Waayo-aragnimadani waxay keentay inay ogaadaan in dadka caqli-galnimada leh ay inta badan ku xayiran yihiin waqtigooda inta badan "shaqada agagaarka shaqada", taas oo ay ula jeedaan waxyaabo ay ka mid yihiin isgaarsiinta emailka, raadinta macluumaadka iyo hubinta in qof kastaa uu ku jiro bog isku mid ah.
Intii ay joogeen Facebook, Moskovitz iyo Rosenstein waxay iska kaashadeen qalab maarayn mashruuc gudaha ah oo loo yaqaan Tasks kaas oo si dhakhso ah uga dhex baxay shirkadda. Umay fekerin wakhtigaas, laakiin hadda waxay u arkaan software-kan inuu yahay tusaale u ah Asana. Caannimada Hawlaha ayaa ka dhigtay inay ogaadaan inay jirto baahi loo qabo badeecad sidan oo kale ah.
2008, waxay ka tageen Facebook si ay u bilaabaan Asana. Aasaasayaashu waxay ku qaateen waqtigooda si ay u horumariyaan alaabta ka hor inta aysan u dhigin dadweynaha. Waxay bilaabeen nooca beta ee bilaashka ah Noofambar 2011. Daah-furka ganacsi ee rasmiga ah wuxuu ahaa Abriil 2012.
Asana waxay dareen ka heshay maalgashadayaasha ka hor inta aysan bilaabin taas oo laga yaabo inay ugu yaraan qayb ahaan sabab u tahay isku xirka aasaasayaasha ee warshadaha teknolojiyadda.
Waxay markii ugu horreysay kor u qaadeen raasumaalka guga 2011 iyagoo malaa'ig ah oo dhan $ 1.2 milyan taas oo ay dhawaan raacday taxane wareeg ah oo dhan $ 9 milyan bishii Noofambar 2011. Waxaa xusid mudan in maalgashadayaasha bilawga ah ay ku jiraan Peter Thiel (oo markii dambe ku biiray guddiga Asana) iyo Sean Parker.
Asana waxay si dhakhso ah u noqotay qalab maarayn mashruuc oo caan ah. Laakin kooxdu kuma aysan nasan niyaddooda. Waxay si hagar la'aan ah u wanaajiyeen alaabtooda iyagoo dhegaysanaya macaamiisha oo horumariyay sifooyinkii ugu badnaa ee la codsado.
Natiijo ahaan, toban sano ka dib Moskovitz iyo Rosenstein waxay ka tageen Facebook si ay u bilaabaan Asana, shirkaddu waxay gaartay qiime dhan $ 1.5 bilyan, maantana waxay leedahay in ka badan 60,000 oo macaamiil ah. Sidoo kale, aasaasayaasha shirkadu waxay aad ugu kalsoon yihiin badeecadooda oo ay dhawaan ku dhawaaqeen in dhammaan 500 oo shaqaale Asana ah ay iska tuurayaan iimaylka gudaha.
Tani waxay ka dhigan tahay in dadku ay weli awoodi doonaan inay la xiriiraan shaqaalaha Asana email ahaan, laakiin looma isticmaali doono isgaarsiinta gudaha shirkadda. Moskovitz wuxuu yidhi:
"Waa wax dabiici ah in qof walba uu abaabulo wada-hadalladooda oo ku saabsan shaqada dhabta ah [...] Inta badan, marka aad la leedahay dunta iimaylka ee aad kula shaqaynayso, run ahaantii waxay ku saabsan tahay mashruuc qaar ka mid ah oo aad ka shaqaynayso, ama qaar ka mid ah walxaha waxqabadka, ama yoolalka. Asana dhexdeeda, taasi waa wax lagu habeeyey 'mashruuc' ama 'hawlaha' mid kasta oo kuwaas ka mid ah waxay yeelan karaan dunta wada sheekaysiga hareerahooda. Markaa wada-hadalladayadu halkaas ayay ka dhacaan.”
Tani waa tallaabo geesinimo leh oo siinaysa Asana kalsooni dheeraad ah. Ka dib oo dhan, haddii software-ku uu ku filan yahay shirkad $1.5 bilyan ah, markaa waxay u badan tahay inay ku fiican tahay ganacsigaaga sidoo kale.
Asana waa qalab maarayn mashruuc oo casri ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad wax ka qabato mashaariicda adag.
Asana waxa ay leedahay sifo Boards ah oo ku salaysan nidaamka Kanban oo kuu ogolaanaya in aad ku sawirto shaqadaada horukac muuqaal ah oo la mid ah kan Trello.
Si kastaba ha noqotee, halka guddiga uu yahay udub dhexaadka badeecada Trello, Asana waa mid ka mid ah astaamaha (sida aad xasuusan karto, Asana ma soo bandhigin ilaa 2016).
Waxa kale oo xusid mudan in, si ka duwan Trello, Asana uu leeyahay nidaam maarayn ku-tiirsanaan hawleed habboon:
Asana ku tiirsanaanta hawsha
Tusaale ahaan: waxaad u calaamadin kartaa hawsha sidii hawl kale oo sugaysa. Dabadeed, marka hawshaas ugu horreysa la dhammeeyo, qofkii sugayay wuxuu helayaa ogeysiis, oo uu sii wato hawshiisa u gaarka ah.
Maskaxda ku hay in hawl keliya ay ku xidhan tahay hawlo kale oo badan oo hawlo badanina ay hal hawl oo kale ku xidhnaan karaan.
Tilmaamaha kale ee muhiimka ah waa Jadwalka waqtiga oo aad isticmaali karto si aad u abuurto qorshe muujinaya sida qaybaha kala duwan ee halxiraalaha ee mashruucaagu u siman yahay. Tani waa hab dheeraad ah oo lagu sawirayo horumarka. Waxay kaa caawinaysaa inaad ku sii socoto wadadii wakhtiga kama dambaysta ah:
Ma ku daalay inaad kala kulanto arrimaha boggaaga WordPress? Hel taageerada martigelinta ugu fiican uguna dhakhsaha badan Behmaster! Eeg qorshayaashayada
Haddii wax isbedelaan, waxaad si fudud u hagaajin kartaa wakhtiga oo aad arki kartaa sida isbeddelku u saameeyo mashruuca oo dhan. Jid ahaan, waxaad sawiri kartaa ku-tiirsanaanta shaqada ee Jadwalka, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in la socdo wax kasta oo ka socda mashruuc adag.
Waxa kale oo jira sifada Jadwalka oo kuu ogolaanaysa inaad ku aragto shaqadaada jadwal, taasoo awood kuu siinaysa inaad aragto isku dhacyada jadwalka tusaale ahaan:
Habka Portfolios waa hab fudud oo lagula socon karo dhammaan hindisayaashaada hal meel taas oo ku anfacaysa marka aad isku mar wada shaqaynayso dhawr mashruuc oo waaweyn. Waxa kale oo aad ka hubin kartaa KPI iyo macluumaadka muhiimka ah ee faylalka wakhtiga dhabta ah si aad u odoroso arin kasta oo waaweyn ka hor intaysan dhicin.
Waxa intaa ka sii xiisaha badan, in kastoo, ay tahay muujinta culayska shaqada ee sahlaysa in la maareeyo culayska shaqada ee xubin kasta oo koox ah:
Asana shaqada culayska
Tani waa qiimo marka aad maamuleyso koox weyn ama dhowr kooxood. Dad badan oo aad u baahan tahay inaad daryeesho, way kuu fududaanaysaa inaad si badheedh ah u shaqeyso ama aad qof u shaqeyso.
Waa wax iska caadi ah in la helo waqtiyo dhimis marmar ah iyo waqtiyo qallafsan, laakiin maamul xumo daba dheeraatay ee culeyska shaqada waxay keentaa qanacsanaanta shaqaalaha. Tani waxay ku kici kartaa shirkadda lacag badan iyada oo loo marayo wax soo saarka oo yaraada iyo hoos u dhaca shaqaalaha.
Asana sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad u beddesho hababka caadiga ah qaab-dhismeedka, taas oo macnaheedu yahay inaadan u baahnayn inaad dib u soo celiso giraanta mar kasta:
Asana moodooyinka caadiga ah
Tani waa muhiim sababtoo ah waxaad dooneysaa inaad wax hagaajiso inta ugu badan ee suurtogalka ah markaad kobcinayso ganacsigaaga.
Waxaad ku xakameyn kartaa cidda heli karta macluumaadka iyada oo loo marayo goobaha gaarka ah ee kuu ogolaanaya inaad hubiso amniga.
Kooxdaadu way sii weyn tahay, gaar ahaana haddii aad isticmaasho kuwa iskood u shaqeysta, waxa sii badanaya muhiimada ay tani noqonayso mar haddii aanad doonayn dadka albaabka ka soo galay inay helaan macluumaad xasaasi ah. Ka hadalka amniga, sifooyinka maamulka ayaa kuu oggolaanaya inaad maamusho waxyaabaha ay ka midka yihiin xaqiijinta iyo xoogga erayga sirta ah, oo lagu daray waxaad dib u dajin kartaa dhammaan furayaasha sirta ah haddii ay dhacdo jebinta amniga.
Ugu dambeyntii, Asana waxay bixisaa in ka badan 100 isku-dhafan oo leh qalabyo kale oo caan ah, oo ay ku jiraan Slack, Google Drive, Zapier… Iyo xitaa Trello!
Asana waxa ay leedahay afar heerar oo kala duwan:
Qorshaha aasaasiga ah ee bilaashka ah. Waxay u fiican tahay shakhsiyaadka ama kooxaha hadda bilaabaya maaraynta mashruuca.
Qorshaha Premium Waxay u fiican tahay kooxaha doonaya inay ka gudbaan aasaaska maareynta mashruuca. Waxay ku kacaysaa $9.99/user/bishii haddii la soo dallaco sannadkii iyo $11.99/user/bishii haddii la soo dallaco bishii.
Qorshaha ganacsiga. Waxay u fiican tahay kooxaha iyo ururada u baahan inay maamulaan shaqada oo dhan mashaariic dhowr ah. Waxay ku kacaysaa $19.99/user/bishii haddii la soo dallaco sannadkii iyo $23.99/user/bishii haddii la soo dallaco bishii.
Qorshaha ganacsiga. Waxay u fiican tahay ururada u baahan taageero dheeraad ah, ammaan, iyo xakameyn. Waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto kooxda iibka Asana haddii aad rabto inaad ogaato qiimaha.
Qorshaha aasaasiga ahi waa mid aad, fiican, aasaasi ah. Waxa kaliya oo ku jira astaamaha asaasiga ah ee Asana sida Hawlaha, Aragtida Liiska, Aragtida Guddida, Aragtida Jadwalka, iyo taariikhaha dhicisoobay. Waxaad la shaqayn kartaa ilaa 15 qof haddii aad raacdo doorashadan.
Qorshayaasha kale waxay la jaan qaadayaan baahida shirkadu iyadoo lagu salaynayo xajmigeeda: Qorshaha Premium waa ganacsiyada yaryar, Qorshaha ganacsigu waa ganacsiyo dhexdhexaad ah, qorshaha ganacsiguna waa ganacsiyo waaweyn.
Waxaad si fudud u dooran kartaa qorshe sida ugu fiican ugu shaqeeya shirkaddaada iyadoo la eegayo tirada kooxdaada.
Maxay yihiin Awoodaha Asana?
Asana xooga ugu weyn ee uu leeyahay casriyaynta iyo xakamaynta granular ee mashaariicda.
Waxaad haysataa dhammaan sifooyinka aad u baahan karto si aad u maamusho koox weyn ama dhawr kooxood oo ka shaqeeya mashruuc adag ama dhawr mashruuc oo adag isku mar.
Waxa kale oo ay ku habboon tahay xaaladaha xiriirka ka dhexeeya hawlaha u baahan in la qabto aysan toos ahayn sababtoo ah waxay kaa caawineysaa inaad aragto sawirka weyn.
Waa ayo Asana ugu fiican?
Asana waxay u fiican tahay ururada waaweyn halkaasoo kooxo dhowr ahi ay isku mar ka wada shaqeeyaan mashaariic badan oo adag.
Waxay si gaar ah qiimo ugu leedahay maareeyayaasha ay tahay inay kormeeraan mashaariicda leh qaybo badan oo dhaqaaqa.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay koox yar, software-kani wuxuu noqon karaa xoogaa xad-dhaaf ah.
Trello vs Asana: Farqiga ugu sarreeya
The Trello vs Asana dood waxay hoos u dhigtaa fudaydka vs kakanaanta. Keebaa ka muhiimsan adiga?
Trello, waxaad heleysaa software fudud, dareen leh, si sahlan loo isticmaali karo kaas oo aan lahayn wax badan oo qalooca waxbarashada ah. Dhankeeda hoose ayaa ah in qalabkani uu xadidi karo marka ay timaado mashaariicda runtii adag.
Tusaale ahaan, la'aanta nidaamka ku-tiirsanaanta hawsha saxda ah waa khasaare weyn marka ay timaado mashaariicda xiriirka ka dhexeeya hawluhu waa adag yahay.
Intaa waxaa dheer, inta aad ku maarayn karto dhowr mashruuc oo toos ah Trello, isku dhafka dhowr kakan oo isku mar ah ayaa laga yaabaa inay adagtahay isticmaalka software-kan.
Kala duwanaanta Trello waxay noqon kartaa mid aad u fiican sababtoo ah waxaad u isticmaali kartaa wax kasta oo aad ka fekereyso (liiska shaqada, mashaariicda shaqada, CRM ahaan, iwm.). Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale ka dhigan tahay in aan loo hagaajin maamulka mashruuca ganacsiga sida ay noqon karto.
Asana, dhanka kale, waxaad heleysaa software casri ah oo leh astaamo kala duwan oo noloshaada kuu fududeyn doona, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay inaad maamusho mashruucyo adag iyo kooxo waaweyn.
Waxaad heleysaa guddiga Kanban, si aad u hesho faa'iidada ugu weyn ee Trello, laakiin sidoo kale waxaad heleysaa dhammaan sifooyinka dheeraadka ah sida Timeline, Portfolios, iwm kuwaas oo kaa caawin kara inaad maamusho dhowr hindise isku mar.
Nidaamka ku-tiirsanaanta shaqadu waa faa'iido weyn sababtoo ah way adagtahay in la maareeyo mashaariicda adag la'aanteed. Dabcan, waxaa sidoo kale jira dhinaca hoose, dhammaan sifooyinkaas waxay ka dhigan yihiin inay qaadan doonto wakhti si aad u barato habkaaga software-ka.
Kakanaanta dheeraadka ah waxay soo bandhigaysaa jilicsanaan dheeraad ah. Qofka qalad sameeya sababtoo ah ma uusan ogaanin software-ka weli waxay saameyn xun ku yeelan kartaa mashruuca oo dhan.
Tani waxay ku dhici kartaa Trello sidoo kale, laakiin aad ayey u yar tahay maadaama Trello aad uga fudud yahay.
Trello vs Asana: Waa kuwee Maareynta Mashruuca ee ay tahay inaad isticmaasho?
Marka loo eego dhinaca dhaqaalaha, waxaad ku heli doontaa lacag badan oo lacagtaada Asana ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku xisaabtanto wakhtiga maalgashiga loo baahan yahay si aad u barato isticmaalka software-kan.
Waxa kale oo muhiim ah in laga digtoonaado dabinka "sifado badan, badeeco ka wanaagsan". Waxa aad rabto waa software kaas oo shaqada u qabta sida ugu toosan. Waxaa laga yaabaa inay macno samaynayso inaad raacdo badeecad leh astaamo yar haddii ay awood ku filan tahay baahiyahaaga.
Marka la soo koobo, Trello waxay u noqon kartaa ikhtiyaarka ugu wanaagsan ganacsiyada yaryar ee leh habab toos ah, halka Asana uu si fiican ugu shaqeeyo ganacsiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn ee u baahan sifooyin dheeraad ah si ay u xakameeyaan kakanaanta ay la tacaalayaan. Haddii aad tahay shirkad fog, labadan qalab ayaa ku habboon in wax la qabto.
Ugu dambeyntii, dhammaan waxay ku xiran tahay xaaladdaada gaarka ah. Taasi waa sababta aad u rabto inaad tixgeliso inaad iska diiwaangeliso Asana's iyo Trello labadaba qorshayaasha bilaashka ah iyo sahaminta alaabada si aad u aragto mid ka sii badan adiga. Labadan ka sokow, waxaa jira waxyaabo badan oo beddelka Trello oo laga heli karo suuqa.
Waa tan su'aasha gubanaysa: @Trello vs @Asana, sidee ayay iskaga hor imanayaan midba midka kale? Fiiri isbarbardhiggayaga qoto dheer oo dooro midka ugu fiican baahiyahaaga! 📌🗂️Riix halkan Tweet
Trello vs Asana: waa maxay xulashada ugu fiican?
Qalab kasta oo suuqa yaallaa waxa uu leeyahay meelaha uu ku fiican yahay iyo meelaha uu ku liito. Ma jiro barnaamij maarayn mashruuc oo “fiican” oo halkaas ka jira. Ama, haddii aad rabto inaad wax ka eegto dhinaca kale, qalabka maaraynta mashruuca ugu fiican waa kan aad dareemi lahayd si dabiici ah adoo isticmaalaya si aad ula socoto shaqadaada.
Malaha waa Trello. Malaha waa Asana. Malaha waa wax kale. Waxa muhiimka ah waa in ay adiga iyo kooxdaadaba u shaqeyso.
Si aad taas u samayso, waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxa baahiyaha dhabta ah ee ganacsigaagu yahay ka dibna dooro software iyaga buuxiya.
Arbitrage Tafaariiqda Amazon sida Istaraatiijiyada Xiritaanka
SEO: 2 Hab oo Wanaagsan oo Looga Saaro Nuxurka Kooban, iyo 8 Kuwa Xun